Galmudug oo qaadeysa Canshuur Mideysan | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Galmudug oo qaadeysa Canshuur Mideysan
Galmudug oo qaadeysa Canshuur Mideysan
Siciid Siyaad Shirwac Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Maamulka Galmudug ayaa sheegay in dhawan ay bilaabi doonaan qaadista Canshuur mideysan kaddib markii sida uu sheegay la mideeyay Maamulka Galmudug.
Waxaa uu sheegay in ay muhiim tahay in dhammaan degaanada maamulka Galmudug si isku mid ah Canshuurta looga qaado.
Wasiirka ayaa xusay in dhammaan Shacabka Galmudug laga doonaayo in ay bixiyaan Canshuurta ku waajibtay.
Waxaa uu xusay in isku tashi uu muhiim u yahay Maamulka Galmudug,waxaana uu sheegay in ku takrifal dhaqaale uusan dhici doonin islamarkaana isla xisaabtan dhab ah ay wajihi doonaan Hay’adaha maaliyadda Galmudug.
Heshiiskii Ahlu Sunna iyo Galmudug ay ku midoobeen ayuu Tilmaamay in ay u saamaxeyso in dhamaan degaannada Galmudug laga qaado canshuur mideysan taas oo uu sheegay in maamul ahaan ay si wanaagsan uga shaqeyn doonaan.
Wasaaradda Maaliyadda maamulka Galmudug ayaa bilihii lasoo dhaafay waday dadaallo kala duwan oo lagu hormarinaayo maaliyadda degaanda Galmudug.